Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l0312 zom
Lesona 03 : Tesalonika tamin'ny andron'i Paoly
14 - 20 Jolay 2012
Zoma 20 Jolay
“Ny fitondran’ Andriamanitra no nitarika ny fizotry ny firenena sy ny fisamontan’ny fihetseham-pon’ olombelona ary ny hery miasa mangina avy aminy, mandra-pahamasaka izao tontolo izao ho amin’ny fiavian’Ilay Mpanafaka (...)
“Tamin’izay fotoana izay dia tsy nanan-kery firy tamin’ny vahoaka intsony ny rafitra nisy teo amin’ny fivavahana jentilisa. Valalanin’ny tantara sy ny angano ny olona. Naniry mafy ny fivavahana izay mety hahafa-po ny fanahiny izy.” – IFM, t. 26.
“Nisy olona tsy tao amin’ny firenena jiosy nanambara mialoha ny fisehoan’ny mpampianatra avy amin’Andriamanitra. Nikatsaka ny fahamarinana ireny olona ireny ka nomena azy ny Fanahy Izay nanindry mandry azy. Nifandimby tahaka ny kintana eny amin’ny lanitra anaty haizina ny fisehoan’ny mpampianatra toy izany. Nampitsiry fanantenana tao am-pon’ny olona an’arivony tany amin’izao tontolo izao jentilisa ny teny faminaniana nentiny.” – IFM, t. 27.
“Rehefa nitsidika voalohany an’i Kôrinto i Paoly, dia nahita fa teo anivon’ny mponina izay niahiahy mandrakariva ny amin’ny mety ho antony manosika ny vahiny ho tonga eo aminy izy. Mpivarotra za-draharaha ireo Grika teny amin’ny morontsiraka. Efa fotoana naharitra dia naharitra no tsy nandeha tamin’ny fahamarinana teo amin’ny raharaha izay nataony izy ireo, ka nanjary nino izy ireo fa zava-masina ny harena miditra, ary ny fahazoana izany, na tamin’ny fomba madio io na tamin’ny fomba maloto, dia mendrika ny hoderaina mandrakariva. Fantatr’i Paoly tsara izany toetran’ireo olona ireo izany, ka tsy tiany mihitsy hisy fotoana na toe-javatra hahafahan’izy ireo miteny hoe nitory ny filazantsara izy mba hahazoany harena.... Nataony mandrakariva izay tsy hisian’ny fahadisoan-kevitra mikasika azy, mba tsy ho very maina ny herin’ny hafatra nentiny.” - GW, tt. 234,235.
• Inona, araka ny hevitrao, no tian’i Ellen White hambara, rehefa nanoratra izy (etsy ambony) hoe nomena ny “Fanahy izay nanindry mandry azy” ireo mpampianatra jentilisa? Hatraiza ny fiasan’Andriamanitra eo amin’ny tontolo ivelan’ny foto-kevitra kristianina? Mety ho voavonjy ve ny olona anankiray na dia tsy mbola nandre na oviana na oviana ny anaran’i Jesôsy akory aza izy? Raha eny, mifototra amin’ny inona ny famonjena izany olona izany?
• Eo amin’ny tontolo manao ahoana no hahatonga ny trano fonenan’olona manokana, na efitrano lehibebe iray, ho toerana mahomby hampiantranoana fiangonana eto amin’ity izao tontolo izao iainantsika ankehitriny ity? Moa ve ny trano fiangonana efa natokana ho amin’izany no toerana tsara indrindra hatao fiangonana? Nahoana no eny ary nahoana no tsia?
• Ahoana no fomba ianaran’ny fiangonanao mampifanaraka tsara kokoa ny asa fitoriana ataony amin’ny fiaraha-monina misy azy? Izany hoe, nahoana no tsy maintsy tsaroantsika mandrakariva fa ny fomba fiasa mety hahomby eo amin’ny faritra iray dia mety tsy hahomby any amin’ny faritra iray hafa?
Famintinana : Tao amin’ny tontolon’i Rôma fahiny no itantaran’ny Baiboly ny asa misiônera nataon’i Paoly. Ny fahitantsika an’i Paoly nitolona tamin’ireo olana natrehiny isan’andro dia ahafahantsika mianatra hoe ahoana no fomba tsaratsara kokoa ampiharantsika amin’izao fotoana izao ireo foto-kevitra sy lesona izay noraketin’Andriamanitra ao amin’ny Soratra Masina ho antsika. Ao amin’ny 1 Tesalônianina sy 2 Tesalônianina i Paoly dia nitari-dalana ireo Kristianina nonina an-tanàn-dehibe tamin’izany fotoana izany, nandritra ireo fotoan-tsarotra nolalovan’izy ireo.